Qodobada Terri Mock ee Martech Zone |
Maqaallada by Terri Mock
Terri Mock waa Sarkaalka Sare ee Aasaaska Isdhexgalka Ve, Bixiyaha xayeysiinta dhijitaalka ah iyo adeegyada suuqgeynta in ka badan 10,000 oo shirkado ganacsi e-commerce ah oo adduunka ah. Mock wuxuu leeyahay in ka badan labaatan sano oo waayo-aragnimo ah hoggaamiye fulineed, oo diiradda la saarayo wadista kobcinta dakhliga, abuurista istaraatiijiyado suuqa lagu kala iibsado iyo kobcinta howlaha ganacsi ee shirkadaha tikniyoolajiyadda.
4 Waxyaabaha ay suuqyadu ka baran karaan Xogta Maalinta Hooyada si loo wanaajiyo Ololayaasha Maalinta Aabbaha
Si dhakhso leh boodhku ugama dego ololaha Maalinta Hooyada inta suuqleydu u jeedinayaan Maalinta Aabbaha. Laakiin ka hor inta aan la dhigin howlaha Maalinta Aabbaha dhagax, suuqleyda wax ma ka baran karaan dadaalkooda Maalinta Hooyada oo ka caawin kara iyaga inay kor u qaadaan iibka bisha Juun? Kadib falanqeyn taxaddar leh oo ku saabsan suuqgeynta iyo iibinta xogta Hooyada ee Maalinta Hooyo 2017, waxaan aaminsanahay inay jawaabtu haa tahay. Bishii ka horreysay Maalinta Hooyada, kooxdeennu waxay ka soo ururiyeen xog intaa ka badan